Fernando José Torres Sanz ama Fernando Torres (Fuenlabrada, 20 maarso 1984), waa laacib oo la ciyaaro kooxda AC Milan iyo kooxda wadankiise ee Spain. Torres ayaa mustaqbalkiisa ciyaareed ku bilaabay Atlético Madrid, isagoo horumarinaya qaab ciyaareedkooda da'da yar ee kooxda koowaad. Wuxuu kulankiisii ​​ugu horeeyay ee kooxda u saftay 2001dii, waxaana uu ku dhameystay waqtigiisa kooxda isagoo leh 75 gool 174 kulan oo La Liga ah. Ka hor kulankiisii ​​ugu horeeyay ee La Liga, Torres wuxuu ciyaaray labo xilli Segunda División ee Atlético, isagoo u saftay 40 kulan wuxuuna dhaliyay 7 gool.
Torres ayaa ku biiray kooxda Liverpool sanadkii 2007-dii, ka dib markii uu saxiixay heshiis rikoorka suuqa kala iibsiga. Wuxuu xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ku soo bandhigay Anfield isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Liverpool tan iyo Robbie Fowler xilli ciyaareedkii 1995-96 isagoo dhaliyay 20 gool oo horyaalka ah xilli ciyaareedkan. Xiddiga ugu goolasha badan taariikhda kubada cagta, wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu dhaqsaha badan taariikhda Liverpool isagoo dhaliyay 50 gool oo horyaalka ah. Waxaa loo magacaabay FIFA World XI 2008 iyo 2009kii. Torres ayaa kooxda ka tagay bishii Janaayo 2011 si uu ugu biiro Chelsea rikoorka rikoorka adduunka ee 50 milyan ginni, taasoo ka dhigtay ciyaaryahanka ugu qaalisan taariikhda Spanishka. Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horeeyay ee Chelsea, Torres ayaa ku guuleystay FA Cup iyo UEFA Champions League, inkasta oo uu ku dhaleeceeyay rikoorka gooldhalinta goolasha hoose ee hoose. Xilli ciyaareedkii xigay, wuxuu dhaliyey goolkii ugu danbeeyay ee 2012-13 UEFA Europa League, isagoo Chelsea ka caawiyay inay ku guuleysato tartanka markii ugu horeysay.
Torres waa ciyaaryahan caalami ah, waxaana uu kulankiisii ​​ugu horeysay u saftay Portugal 2003dii. Waxa uu soo laabtay in ka badan 100 jeer, waana ciyaaryahanka seddexaad ee ugu goolasha badan xulka qaranka. Iyadoo Spain ay ka qeybgashay lix tartan oo waaweyn: UEFA Euro 2004, Koobkii Adduunka ee 2006, Euro 2008, Koobkii Adduunka 2010, Euro 2012 iyo Koobka Adduunka 2014. Spain ayaa ku guuleysatay seddexdii kulan ee ugu dambeysay 2008 ilaa 2012, iyadoo Torres uu dhaliyay labadii Euro 2008 iyo Euro 2012.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Fernando_Torres&oldid=179332"
Last edited on 1 Sebteembar 2018, at 09:57